Ra’iisul Wasaaraha oo ku dhawaaqay Xukuumad ka kooban 20-Wasiiro wajiyo cusub ah (Akhriso magacyada) - Wargeyska Faafiye
Home 2015 January 27 .Warka Ra’iisul Wasaaraha oo ku dhawaaqay Xukuumad ka kooban 20-Wasiiro wajiyo cusub ah (Akhriso magacyada)
Ra’iisul Wasaaraha oo ku dhawaaqay Xukuumad ka kooban 20-Wasiiro wajiyo cusub ah (Akhriso magacyada)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa goor dhow magacaabay Xubnaha Golaha Wasiirada cusub, kuwaasoo ah dhamaan wajiyo cusub, iyadoo aanay ku jirin Wasiiradii lagu muransanaa iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
Golaha wasiiradan oo ka kooban 20-Wasiir ayaa ah kuwo ku cusub saaxada siyaasada, halka qaarkood horay xilal u soo qabteen, waxaana magacaabistooda oo aheyd mid lama filaan ah.
Ra’iisul wasaaraha ayaa magacaabay 20-wasiir kaliya, iyadoo uu dib uga soo magacaabi doono Wasiir kuxigeenada iyo Wasiiro dowlayaasha.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabidrashid Cali Sharmarke ayaa caawa ku dhawaaqay Golaha Wasiirada, kadib wadatashi uu la yeeshay madaxweynaha, gudoonka baarlamaanka, xildhiibanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, Golahaan Wasiirada ayaa waxay ka kooban yihiin 20 wasiir, iyadoo si dib laga soo magacaabayo Wasiiro Ku-xigeenada iyo Wasiiro Dowlayaasha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa si xushmad leh uga codsaday Xildhibaanda Baarlamaanka iney soo dhaweeyaan Golaha Cusub ee Xukuumadda, markii la horkeeno Golahana ay ansixiyaan, si loo dar-dargaliyo howsha culus ee na hortaala.
“Aniga oo gudanaya waajibka dastuuriga ee ay ummadda Soomaaliyeed iga sugayso oo ah inaan soo dhiso Xukuumad buuxinaysa shuruudaha qabashada xilalka Wasiirnimo isla markaasna ku sifoobaysa aqoon, hufnaan, waayo argnimo iyo karti ay ku xaqiijin karaan himilada aynu doonayno inaan hiigsano sanadka 2016-ka. Kadib markaan wada- tashi dheer la sameeyey Madaxweynaha, Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, Guddoonka Baarlamaanka, Xubnaha Baarlamaanka, Qurba Joogta, Ururada Bulshada iyo dhammaan Shacabka Soomaaliyeed ayaan aniga oo og muhimadda ay leedahay in la helo xasilooni siyaasadeed oo horseeda sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaaqalaha dalkeena oo maanta maraya meel wanaagsan ayaan magacaabay Golaha Wasiirada caaway” ayuu yiri RW Cumar.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Wasiirrada uu caawa soo magacaabay aysan wax raad ah ku lahayn khilaafka siyaasadeed ee hadda jira, isla markaana buuxin karaan hawsha ay shacabku ka filanayaan.
“Waxa aynu la soconaa in mudooyinkii u dambeeyay uu hakad galay hawlihii Xukuumadda oo laf-dhabarka u ahaa ummadda, mana ahan arrin lagu sii jiri karo. Waqtiga gaaban awgiis, waxaan hadda soo gudbinayaa magaabista Wasiirrada oo kaliya, waxaan sida ugu dhakhsaha badan usoo gudbin doonaa Wasiirro Ku-xigeenada iyo Wasiirro Dawlayaasha”
Ugu danbayntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu mas’uul ka yahay waajibna ka saaran yahay inuu gacan ka geysto horusocodka dalka iyo inaan mar dambe dib loo noqon. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in aan xaqiijino fulinta hawlaha ahmiyadda koowaad u leh xukuumadda, gaar ahaan Hiigsiga 2016-ka.
Xubnaha ku cusub Golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ah C/raxmaan Ceynte oo ahaa Madaxii Machadka daraasaadka Siyaasada ee Heritage oo loo magacaabay Wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga.
Sidoo kale waxaa ka mid ah C/raxmaan Odawaa oo ahaa Gudoomiyihii jaamacada SIMAD, kaasoo isna loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Xubnaha kale ayaa isugu jira kuwo horay xilal uga soo qabtay Xukuumadihii KMG, sida Cali Axmed Jaamac Jengeli oo dhowr wasiir soo noqday, Sahra Maxamed Cali Samatar oo Wasiiru dowle ka soo noqotay Xukuumadii Farmaajo.
Ninka kaliya ee ku jira labadii Xukuumadood ee la riday ayaa ah C/risaaq Cumar Maxamed oo Xukuumadii Saacid ka ahaa wasiirkii Kheyraadka, halka haatan loo magacaabay Wasiirka Batroolka, Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga.
Golaha Wasiiradan cusub ayaan ku jirin Wasiir Amni, waxaana muuqata in laga kaaftoomay oo uu is qab qabsigii horay u jiray ee ka taagnaa Wasiirada ku dhowaa Madaxweynaha inay wasaaradaas la baxday, lamana shaacin halka la geeyay.
Arrimaha ku cusub Golaha Wasiiradan 20-ka xubnood ah ayaa in saddex Haween ay heleen Wasiiro, taasoo ah markii u horeysay ee Golaha wasiirada ka mid noqdaan Saddex Haween.
1- Maxamed Cumar Carte (Qaalib) Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Shaqada, Dhalinyarada iyo isboortiga
2- Axmed Xasan Gaboobe (Ugaas Bile) Wasiirka Cadaalada iyo Arrimaha Diinta
3- C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka
4- Maxamed Aadan Ibraahim (Fargeeti) Wasiirka Maaliyada
5- C/qaadir Sheekh Cali Diini Wasiirka Gaashaandhiga
6- C/salaan Hadliye Cumar Wasiirka Arrimaha Dibada
7- Khadra Bashiir Cali Wasiirka Wasiirka Waxbarashada
8- Fahad Yaasin Xaaji Dahir Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda
9- C/raxmaan Yuusuf Cali Ceynte Wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga
10- Nuur Faarax Xirsi Wasiirka Dastuurka
11- Guuleed Xuseen Qaasim Wasiirka Warfaafinta iyo Isgaarsiinta
12- Cali Axmed Jaamac Jangeli Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada
13- Saciid Xuseen Ciid Wasiirka Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa
14- Cali Xasan Cusmaan Wasiirka Beeraha
15- Xasan Axmed Muudeey Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha
16- Saalax Sheekh Cusmaan Muuse Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska
17- Sahra Maxamed Cali Samatar Wasiirada Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha
18- Maxamed Mukhtaar Ibraahim Wasiirka Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda
19- C/risaaq Cumar maxamed Wasiirka Batroolka, Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga
20- Xaawo Xasan Maxamed Wasiirka Caafimaadka
Canada’s new exiles.
Dilalka Muqdisho oo iska socda
Two Somali women get 10, 20 years for aiding Somalia terrorists
Hooyo Somaaliyeed oo ku dishay cunugeedi oo 2 jir ah Minneapolis.
AMISOM: Ammaanka wadada aada Sh/Hoose.